Demo in Hindu
. Ity tolotra ity dia natao ho fanehoana fotsiny ihany fa tsy tena izy, ny tanjona dia hampisehoana ny fahamorana ny fompiasana ny School 2016, tsindrina ny sary [fond gris, dans la barre orange] mba ahitana fisokafana sy fanidiana ny fenetre, izy io dia maneho ny daty, ora, kilasy, sekoly, ny mpampianatra ary ny taranja izy ampianarina, izy ireo dia miaraka miseho amin'ny Ecran
. Ny solosaina, ny finday avolenta no afaka ampiasana ity fanoharana ity ary tsy ilaina akory ny mampiasa ny Internet
. Ity tolotra ity dia entina hanehoana ary hanamaivanana ny asan'ny mpampianatra ary tsy handaniana ora maro raha ny resaka registre de presence no resahina, izay amin'ny alalan'ny telephona irery ihany
. Ohatra ho an'ny mpianatra 5, [Jhon, Lennon, Paul, George ary Elvis] ary Period 5 [ P1, P2,P3, P4, P5], raha hiantso Jhon, tonga, tsindrina ny caseP2 raha tonga izy dia lasa maintso ny lokony ary raha tsy tonga izy dia lasa mena, hevitra iaray entina hanamoraina sy hifehezana ny ora fampianarana ao andakilasy ny School2016 ary mora ny mampiasa azy, koa raha misy ny fanamariahana na tolokevitra avy aminareo dia raisina an-tanandroa
. Raha toa ka lina amin'ity tolotra ity ny sekly sy ny mpiara miasa aminy dia afaka manao fanoharana ao ami'ny kilasy iray izay tsy handoavam-bola mandritra ny iray volana, ahitana ny fomba fiasa eo anivon'ny fifandraisana momba ny fampianarana amin'ny Ray aman-dReny,ny famitanan'ny mpianatra ny enti-mody, ny fifaneraserana ami'ny mpampianatra sy ny mpitantana. Ity fanoharana ity dia hanehoana tanteraka ny maha maivana ny asa fanabeazana izy misy any anstekoly sy ny ray amandreny ny mpianatran ary ny mpanabe sy ny mpitantana ary halalan'ny tsirairay ny zava-misy ao antsekoly, aorian'ny fanoharana raha toa ka mety ami'ny sekoly iray ny tolotra dia atao ny fifanarahana
. Alefaso am'ny mailaka, [email protected] miaraka amin'ny mombamomba ny sekoly sy ny mpianatra ary ny fitantanana ahafahana manomana ny taratasy rehetra ho ara-dalana mba hahazoana alalana fa tsy handoavam-mbola ny tolotra fanoharana
. Ny School2016 dia natolotra ho an'ny sekoly rehetra tsy ankanavaka, na mahaleo tena na sekolimpanjakana izay ahafahana miara miasa tanteraka amin'ny minisiteram-panabeazam-pirenena
. Ny pejy izay nanaovanao ny registre d'appel ohatra dia afaka telechargenao ihany koa.